Hillary Clinton oo ka digtay "cawaaqibka Ka dhalan kara" ka bixidda Afghanistan
Tuesday May 04, 2021 - 07:04:30 in News by A. Asbaro
Hargeisa(HWN):-Wasiirkii hore ee arimaha dibada Maraykanka, Hillary Clinton, ayaa ka digtay "cawaaqib ballaadhan" oo ka dhalan doona go'aanka Madaxweyne Joe Biden ee soo saaridda ciidamada Maraykanka ee Afghanistan.
Clinton ayaa telefishanka CNN u sheegtay in ay jirto khatar ah in ay Taliban markale xukunka dalkaa qabsan karto. Maraykanka ayaa doonaya inuu dhamaystiro ka bixitaanka ciidamadiisa 11 Sebtember. Hase yeeshee Taliban ka ayaa weeraro ka fuliya dalkaas.
Hilary Clinton, sida Biden oo isna ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ayay aad u taageersanayd duulaankii Maraykanku ku galay Afghanistan weerarradii 9/11 ee 2001 ka dib. Biden ayaa doonaya inuu dhamaystiro ka bixitaanka ciidamadaas marka ay buuxsanto 20 guurada weerarkaas sannadkan dabayaaqadiisa.
Ugu yaraan 2500 oo askari oo Maraykan ah ayaa haatan jooga dalkaas oo qayb ka ah xoogagga NATO ee Afghanistan jooga. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ka bixitaanka Maraykanku yahay mid haboon maadaama oo ciidamada Maraykanku ay xaqiijiyeen in dalkaasi aanu haatan saldhig u ahayn jihaadiyiinta shisheeye oo aanay weerarro reer Galbeedka lagu qaado ka soo maleegi karin.
Askarta ugu dambaysa ee Maraykanku waxa si rasmi ah bixitaankoodu u bilaabmay 1May, iyada oo uu jiro qalalaase isa soo tarayaa. Ciiddammada nabadgelyada Afghanistan ayaa heegan la geliyey si ay uga falceliyaan wixii weerarro ah ee la soo qaado.